Urrurka Muslimiinta midoobay oo laga codsaday ineey soo celiyaan dhaqaale horeey loo siiyey | Somaliska
Urrurka Muslimiinta midoobay oo laga codsaday ineey soo celiyaan dhaqaale horeey loo siiyey
Urrurka lugu magacaabo Urruradda Midoobbay ee dalkaan Iswiidhan, ayaa laga codsaday in ay dib u soo celiyaan dhaqaale horeey dowladu u siisay. Ka dib markii urrurkaan lugu eedeeyey in muxaadarooyinkooda ay u ogolaadeen kooxo asal raac ah.
Urruurkan oo si mutadawacnimo leh u shaqeeya ayaa dowladda waxaa ay siisay dhaqaale qorshihiisa ahaa in lugu maareeyo “dhalinyaradda iyo arrimaha la xirriira su’aalaha mujtamaca” si loo sameeyo mashruuc ka dhan ah kooxaha cunsuriyiint oo la yiraahdo “Stå upp 2.0”. Hase ahaatee urrukan ayaa lugu eedeeyeey ineey muxaaradooyinkooda ku casumeen wadaado la sheegay ineey taageero u hayaan kooxaha Daacish iyo Alqaacida.
Urrurkan ayaa warqad qoraal ah oo ay u direen dowladda ku sheegeen in shaqsiyaad iyaga ka tirsan la bartilmaameedsaday iyagoo dembi loo sameeynayo. Waxaa ay sidoo kale sheegeen in muuqaal lugu baahiyey barta Yotube-ka uu ka soo dhex muuqday shaqsi ay ku sheeegeen inuu yiri “Dumarka waxaa ay galayaan naarta haddii aan coowradooda asturan”
Si kastaabba ha ahaatee, waxaa haatan kooxdan laga doonayaa ineey dib u soo celiyaan adduun gaaraya 535.200 ( shan boqol soddon iyo shan kun iyo labbo boqol). Urrurkan ayaa sidoo kale u aragta go’aankaasi lacagta looga soo celinayo mid qaldan.
“Muuqaalkaan waa mid hore, waanu xalinay mar hore iyadoo aan muuqaalkaas meesha ka saarnay, ka hor intuusan wargeyska Aftonbladet iyo cid kaleba arkin. Wixii markaasi ka dambeeyeyna waxaan u shaqeeyneynay si adag si urrurka u noqdo goob ammaan u ah cid kasta” ayuu yiri Wassim Goma oo qoraal war murtiyeed ah ku yiri sidaas. Wargeyska Aftonbladet ayaa ugu dameyntii waxaa uu dhawaan soo bandhigay muuqaalo muxadaaro ah oo ay dadkii jeedinayeen ku sheegeen hadalo lugu tilmaamay in haweenka xorriyadooda meel uga dhaceen.
Arday & macalin isku qilaafay nabi ciise
Bulgaariya oo mamnuucday xirashadda Niqaabka
Ramadan waa Arbacada, Insha Allah